Chicken Chubaty: foto na nkọwa nke ụdị, njirimara ya na àgwà ya, ihe kachasị mma nke na-eto eto - Ugbo ala ugbo - 2020
Chickens na okpueze - ụdị Chubatye
Ụdị ọkụkọ a na-adọta uche, nke mbụ, ya na data mpụga ya. Ọkụ dị iche iche nwere nkwanye ùgwù dị na isi ha, dịka a ga-asị na ha ghọtara ọdịdị mpụga ha site na hens ndị ọzọ, dị ka a ga - asị na ọ bụ okpueze nkịtị ha, dị ka a ga - asị na ọ bụghị naanị ọkụkọ, ma ọkụkọ ọbara dị ọcha.
Enweghi nkọwa zuru ezu nke akụkọ ihe mere eme nke hens nke Chubaty. O yikarịrị ka ọ sitere n'akụkọ ihe mere eme ma dịrị n'ókèala Ukraine. Nke a bụ nsụgharị ziri ezi, ebe ọ bụ na a pụrụ ịchọta hens ndị dị na ógbè ọ bụla dị na Ukraine, a naghị asụgharị ha ruo ọtụtụ iri afọ, ha aghọwokwa ihe ngosi na-akwadoghị nke ugbo ọkụkọ nke Ukraine.
Na-ekpe ikpe site na ụfọdụ ọrụ okike nke a na-etinye na ndụ ndị ogbenye (akụkọ ntụrụndụ, nkà a na-ahụ anya), a pụrụ ikwubi na ụdị ọkụkọ a dị na Ukraine ruo ogologo oge.
Ụdị ọkụkọ a na-enwe na mpaghara Central Central Ukraine. Ọ naghị adịkarị n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ndịda. Na mpaghara Poltava ha na-eri nri na asọpụrụ Poltava - Poltava ụrọ. A na-enweta aha nke ìgwè, ekele maka "kaadi azụmahịa" - otu iko n'isi.
Ebee ka ịzụta na Russia?
Agba nkọwa Chubatye
O doro anya na a na-achọpụta na a na-ejikọta Ukraine n'ihi àgwà a na-ahụ maka isi. Ọ bụ mma ya na àgwà ya. Enweghị ibu ọrụ, ma e wezụga maka ịchọ mma, pinion anaghị ebu.
Ndị na-anụ ọkụkọ nke ìgwè a n'ihi na ọkpụkpụ na-eme ka ọ ghara ịdị na-adaba na ya, ma na-ada n'akụkụ ya, na-enweghị ihe kpatara ya, ọ bụ ihe nhụjuanya nke nnụnụ ahụ. N'ime ọkụkọ, a pụghị ịsị na a na-akpọ uwe elu, dị ka ọ na-eme, nwere ọdịdị nke oval na-ele anya dịka nwa edozi.
Ụdị mgbochi na hens cubed bụ akwukwo ahihia, beak dị ike, bu n'obi maka ikpoghari nke roughage na nnukwu osisi (dịka ọmụmaatụ, ọka). Mkpụrụ ọkụ ndị a dị n'obe ma gbaa ya gburugburu, ahụ ha dị ike, ya na akụkụ anụ ahụ nke ọma. Ahụ dị ogologo.
Mkpịsị ụkwụ adịghị ele anya dị ike karị, ma ndị nne na-azụ anụ ahụ na-anagide ha, jiri nlezianya na-agbanye ikpo na ikpo mmasị ha. Ụdị nke ndị na-agba afa na-agbanwe site n'ìhè, nke a na-akpọ Colombian ka ọ dị oji.
N'etiti ndị ọrụ ugbo na-anụ ọkụkọ na-amị amị, Ukrainian Chubar (ha na-akpọkwa ya) dị oké mkpa:
Nke mbụ, maka ihe eji achọ.
Nke abuo, n'ihi na nke anumanu na akwa umu anu ulo.
Akụkụ nke atọ nke ndị ọrụ ugbo na-anụ ọkụkọ na-enwe ekele dị ukwuu.
Ngwakọta anụ ọkụ a adịghị mma nke dị nwayọọ na Ukraine, dịtụ ji obi ike na-eguzogide frosts siri ike na okpomọkụ na-agwụ ike. Kedu ihe ọzọ a nwere ike itinye na akụ nke ụdị a? Eziokwu ahụ bụ na ọkụkọ, mgbe ọ ruru afọ ụfọdụ, ghọọ ọkụkọ magburu onwe ya - ndidi na ọrụ.
Enweghị mbempe akwụkwọ a na-akpọ ụdị ọkụkọ, ma ọ bụghị na ndị nnochite anya nke Chubaty nke Ukraine enweghị nrubeisi, yana ọkụkọ ndị ọzọ. Nnyocha na-enweghị ikike nke ebe dị ize ndụ na ịrị elu na-arịwanye elu n'oge na-agafe nwere ike ibudata ihe osise zuru oke nke ọkụkọ na-eri.
Ọ dịghị ihe pụrụ iche na ọdịnaya nke hens nke Ukraine chubat (crested) ìgwè. Dịka anyị kwusiri ike, ọkụkọ ndị a na-eri nri: ha na-eri ihe ha na-enye, nọdụ ala na ihe ahụ onye nwe ụlọ nwere ike inye.
Otú ọ dị, ọbụna ụdị ndị na-enweghị atụ na-achọ ịdị ọcha nke ọkụkọ coop, ọnụnọ nke ọkụ dị n'ime ụlọ, ikuku na okpomọkụ, okpomọkụ n'oge oyi.
A na-ahọrọ ndị na-eri anụ maka ndị ọkụ ọkụ na afọ ole na ole.ọ bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị ịtụtu ọka n'elu ala, dị ka ndị na-azụ ihe amateur n'ime obodo nọgidere na-eme n'ụzọ ochie. Ọkụkọ kwesịrị inwe ebe maka nri, nke, nke mbụ, ruo n'ókè ụfọdụ ka nnụnụ ahụ na-enye ọzụzụ, ma, nke abuo, na-enye gị ohere iji nri na-eri nri.
Ọkwá dị ọkụ nke ọkụkọ bụ ndị omenkà niile nke aka ha - nke ọma, ọ dịghị mkpa ọ bụla maka ha, ma e wezụga otu: mmiri dị ọcha ga-adị mgbe niile na ndị na-aṅụ mmanya, n'ihi na e mere ahụ ọkụkọ ka o wee ṅụọ okpukpu abụọ nke nri eri n'ụbọchị.
Oryol calico hens nwere ọdịdị pụrụ iche. Mana nke a, ha ka nwere ọtụtụ àgwà ọma.
Ị nụla banyere ịdị adị nke ụdị ụdị a dịka Brahma dwarf? Edeelarị ederede nyocha zuru ezu.
Ma na ibe a i nwere ike ihu otu esi eme akwa akwa ifuru.
Akụkụ ọzọ dị mkpa nke ọdịnaya nke ọkụkọ crested bụ ọnụnọ ash na sand bath. N'okwu ndị ọzọ: nye ọkụkọ na ebe ha nwere ike ịnweta ezigbo ihe. Nke a abụghị ihe na-atọ ụtọ maka ọkụkọ, ma usoro kachasị ọcha - ọkụ ọkụ na anụ ọkụkọ na aja na uyi, ikpochapụ nje na microflora ndị ọzọ na-emerụ ahụ.
Ukrainian chubaty bụ anụ ọkụkọ anụ-anụ ọkụkọ. Ahụhụ nke ndị okenye na-adịghị adaba - 2.2 n'arọ n'ime ọkụkọ na 3.0 n'arọ n'ime oke ọkpọ. Nke a bụ ihe dị arọ nke dị arọ n'ọtụtụ ụdị anụ anụ ọkụkọ na ntụziaka.
Ọkụkọ na-amalite ịgba ọsọ mgbe ọ dị ọnwa isii, emepụta mkpụrụ na afọ mbụ bụ ihe dịka nsen 160. Nsen sitere na ọkụkọ ndị a bụ nke ọkara, otu ihe ruru 60 g, agba nke shei bụ ezigbo creamy.
Nzụlite nke ụmụ chicks na ìgwè a dị nnọọ elu: ihe ruru 85 chicks zuru ezu na-n'enweghị ihe ọ bụla na ọtụtụ narị àkwá a mụrụ. Nchebe nke anụ ụlọ bụ 88% n'etiti anụ ọkụkọ ndị okenye na 90% n'etiti ụmụaka na-eto eto.
A na-azụlite ụdị ọkụkọ ndị Ukraine na-ere ma na-ere ugbo ọkụkọ ndị Ukraine. Anyị na-enye gị ozi banyere ụlọ anụ ọkụkọ ndị e gosipụtara na kọntaktị nke ndị nnọchianya ha:
PE "Gold Kurchatko"(" Golden Chicken ").
Adreesị: Ukraine, Cherkasy mpaghara, Talne, Dubkovetskogo str.;
//zolote-kurchatko.all.bizDoCHP Ugbo ugbo "Borki". Adreesị: 63421 Kharkiv mpaghara, district Zmievsky, p. Borki;
Nke kachasị nso na hens na Ukraine "na mmụọ" na geographically abụọ udiri anumanu si na-emepụta nke Ukraine: Poltava ụrọ na Ukraine ushanka.
Dị ka chubaty, ụdị ndị a anaghị adị mfe maka ọnọdụ ejidere, na-anabata oge oyi nke ọma, aji mkpuchi nwekwara feathers dị mma, na-ebu otu, nkezi, àkwá na okenye na-eji otu kilogram abụọ kilogram. Naanị ihe na-egosi ọdịiche dị na earflaps si na hochlatokes bụ ọnụnọ nke "aji" dị iche iche n'elu ntị.
Ụrọ poltava sitere na ìgwè ndị dị na mbụ dị iche iche dị iche iche na mpụga dị iche iche: obere uhie uhie uhie na ikuku na-acha uhie uhie. Hen Poltava enweghi uru ọ bụla ọ ga-eji chọọ mma karịa ikpuchi ya.
Mgbachi nke Poltava ụdị na earflaps na ụmụ ahụhụ na-adaba na-arụpụta ihe na-emepụta akwa akwa: 180 nsen kwa afọ, ọnụ ọgụgụ nke àkwá na agba nke shei. Ndị okenye Poltava hens adịghị aka karịa nke chubarok na eared fly - ọkọlọtọ 2 kilogram nke nne okuko na ọkọlọtọ 3 - nke oke ọkpọ.
Ọtụtụ mgbe, ụmụ nwanyị (na Ukraine, ndị inyom na-eburu ọrụ maka ịzụ anụ ụlọ n'ụlọ) tụlee ịzụta ụdị ọkụkọ ndị a dị ka ihe yiri nke ahụ. Abara na mmepụta anụ na ọnụ ọgụgụ nke mmụba nke anụ anụ ahụ na mbụ. A zụrụ Chubarok ka ọ bụrụ ogige ụlọ. Mmetụta nke brooding bụ nke dị n'ime ụdị anụ ọhịa atọ ahụ, n'ihi ya, ha na-eleda anya na ha ga-eme ka ìgwè ehi ahụ dị ọhụrụ n'ọdịnihu.